တခြမ်းပဲ့ ဗလီ သမိုင်းက ပြောသော မြန်မာမွတ်စလင်တို့ ၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« IMM 50th Anniversary, T Shirt
Clinton meets Suu Kyi in Myanmar video »
Source: မွတ်စလင် သတင်းစဉ် “တခြမ်းပဲ့ ဗလီ သမိုင်းက ပြောသော မြန်မာမွတ်စလင်တို့ ၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ”်
……. ထိုမြန်မာတပ်အားလုံး၏ စစ်ဆင်ရေးဗျူဟာမှာအဆင့်အဆင့် ချီတက်တပ်စွဲလေ့ရှိသောခံတပ်စ်ဆင်ရေးသာလျှင် ဖြစ်၏ ။ ထိုခံတပ်စစ်ဆင်ရေးများ၍မြန်မာတို့သည် စိတ်ကူဉာဏ် ကောင်းသူများဖြစ်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါ အားတက်သရော ပြူမှုဆင်နွဲ လေ့ရှိသည်။ ခံကတုတ်များကနေ ၍ မယိမ်းမယိုင်သောစိတ်ဓါတ် ရဲရင့်သောသူရသတ္တိတို့ဖြင့် ရင်ဆိုင်လေ့ရှိကာထိုမြန်မာတို့အားစစ်မြေပြင်ရှိစစ်သားများအဖြစ် နှင့်မူကားကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသူများအဖြစ် တွေ့ရ၏”
ဤသို့ ဘကြီးတော်မင်းတရားကြီးကတိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် သစ္စာရှိစွာနှင့် တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြ သောတပ်မတော်သားများကိုဂုဏ်ပြုသည် အခမ်းအနားတွင် ကုလားပျို၊ သေနက်အစု သား၁၃၀၀ ကျော်တို့ကိုဘောက်တိုရွှေပိန်း၊ မျဉ်းတိုသက္ကလပ် စိမ်း၊ မျဉ်းရှည်းသက္ကလပ် နီ၊ သက္ကလပ် စိမ်းအဖြူ ဆင့်တို့ကိုချီးမြင့်ခဲ့သည်” ဟူ၏။ ( ကုန်းဘောင်ခေတ် ရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ဒုတိယတွဲ ၊စာ – ၄၇၇)
This entry was posted on November 30, 2011 at 1:52 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.